jeudi, 31 mai 2018 15:50
Santé Plus Antsirabe sy “Les Enfants de Noma”: Sembana ara-batana miisa 120 eo no hotsaboina maimaimpoana
Mitohy ny 31 mey ka hatramin’ny 6 jona ny fandidiana maimaimpoana ataon'ny Santé Plus Antsirabe sy ny fikambanana Les enfants de Noma avy any Frantsa. Olona manana fahasembanana amin’ny ratsam-batana manodidina ny 120 no hisitraka ny fandidiana hataon’izy ireo.
Ny ankizy aloha no tena laharam-pahamehana, hoy i Dr Benja, Talen’ny Santé Plus, ka izay tena tsy vita amin’izao andiany izao dia amin’ny volana septambre 2018 indray.
Mpitsabo teratany vahiny miisa 8, no hifarimbona amin’ny Santé Plus Antsirabe hanatanteraka izany amin’ity indray mitoraka ity.
jeudi, 31 mai 2018 11:40
Andramasina: Noraofin’ny Zandary ny sorabaventy nolanjain’ny mpanohitra
Tonga teto Andramasina, Distrika fiavian-dRtoa Voahangy Randriamanana andefomandriny, tamin’ny helikôptera ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany maraina, nitarika delegasionina nitokana tranon’ny Birao Ifoton’ny Fananantany (BIF) ary koa nizara karatany.
Tonga nitsena ny filoha tamin’ny sorabaventy mitaky ny fialany ny mpanohitra teto Andramasina.
Niditra an-tsehatra avy hatrany ny Zandary eto an-toerana nangorona ary nangeja ireo sorabaventy ireo, fa izay no baiko azon’izy ireo.
Aiza ilay demokrasia sy fahalalahana maneho hevitra dradradraina, hoy ireo nikasa hilanja sorabaventy tamin’ny fahatongavan’ny filoha teto Andramasina androany ireo.
Kolontsaina: Nodimandry androany teo amin’ny faha-83 taonany i Dadagaby « Voninavoko »
Lavo ny andrarezina ! Androany maraina, 31 may 2018, no nanao fanambarana tamin’ny anaran’ny fianakaviany tao amin’ny pejy fesibokiny ny zanany lahy, Christian Tsilavina, milaza fa “amin'alahelo lehibe no ilazanay fianakaviana fa nodimandry androany maraina tamin’ny 5 ora i Dada (Dadagaby). Efa nanao ny ala nenina ny mpitsabo fa dia lasana izy anio”.
Tsy maintsy mandeha mianatra avokoa ny tanora latsaky ny 16 taona.
Miditra Service National avokoa izay tsy mianatra nefa tsy manana asa rehetra manomboka ny 17-50 taona, na vavy na lahy, obligatoire io.
Ireo mihoatra ny 50 taona, ireo mpitaiza, ireo reny na ray mikarakara tokantrano, mpanabe, mpitondra fivavahana, mpikarakara fikambanana sosialy, sport, zava-kanto, ireo manana kilema, dia manokana andro iasany arakarak'izay vitany.
Ireo tsy salama na tsy afaka fizaham-pahasalamana na visite médicale dia tsy manao SN.
jeudi, 31 mai 2018 08:15
Faritra SAVA: Hanao “Opération” lehibe ny Zandarimariam-pirenena
Hanomboko ny 31 may 2018 ny “Opération” ho fampandriana fahalemana momba ny lavanila amin’ireo kaominina miisa 86 ato amin’ny Faritra SAVA, hoy ny Komandin’ny Vondrotobim-pileovan’ny Zandarimaria SAVA Lieutenant-Colonel Besoa Sirnot.
Ho fanohanana ny “Opération” goavana ataon’ireto mpitandro filaminana ireto, dia nanolotra fiara tsy mataho-dalana miisa efatra ny vondron’ny mpandraharaha lavanila GPAS (Groupement des Préparateurs Acheteurs de vanille SAVA).
jeudi, 31 mai 2018 08:13
Ambalavao Tsienimparihy: Miala ny filoha, fongorina ny kolikoly
Nafana ny hetsi-bahoaka teo amin’ny kianjan'ny “Atao ro Hita” ny alarobia 30 may 2018, niverimberina teto ny fitakiana ny fialan'ny filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina ary koa ny famongorana ny kolikoly.
Nanentana ny fotoana ny tarika Kakabô sy Jedy.
jeudi, 31 mai 2018 08:07